नेता बस्नेत भन्नुहुन्छ : वामदेव सक्किए अब माधब नेपाल पनि सकिन्छन ! – yuwa Awaj
नेता बस्नेत भन्नुहुन्छ : वामदेव सक्किए अब माधब नेपाल पनि सकिन्छन !
कार्तिक १८, २०७७ मंगलबार 4
काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य, सांसद तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले नेपालको राजनीतिमा जहिलेपनि तेस्रो शक्ति निर्णाय हुने र सक्किएको ईतिहास सुनाएका छन् ।
नेकपाभित्रको कुरा गर्दा आजको दिनमा माधव कुमार नेपाल निर्णायक शक्ति हो ? भनेर पत्रकार धमलाले सोधेको प्रश्नमा नेता बस्नेतले भने,‘तेस्रो धार चाहीँ निर्णायक शक्ति हुन्छ, सकिन्छ नेपालको राजनीतिमा । तपाईले कत्तिको याद गर्नुभएको छ? कुनैबेला राप्रपा तेस्रो धार थियो ।
सूर्य बहादुर थापा र लोकेन्द्र बहादुर चन्द पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र मनमोहनको सरकार ढाल्नेदेखि लिएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार ढाल्नेसम्मको कुराले त्यसले क्षति कांग्रेसलाई पनि गर्यो ।
देउवा र गिरिजाबीचको विभाजनको तहमा नै पुग्यो । हाम्रो पार्टी पनि फुट्यो । तर, त्यसले के भन्दा राप्रपा भन्ने पार्टी चाहीा सधैंको लागि सकियो ।
हाम्रो पार्टीभित्र पनि कुनैबेला सिपी मैनाली तेस्रो शक्ति हुनुहुन्थ्यो, सिपी मैनाली सकिनुभयो । कुनै बेला वामदेव गौतम तेस्रो शक्ति हुनुहुन्थ्यो, वामदेव गौतमले माले बनाउनुभयो, र वामदेव गौतम पनि लगभग सक्किनुभयो । तेस्रो शक्ति निर्णायक हुन्छ, तर सकिन्छ ।’
Prevनेकपा फुटाएर नेपाललाई प्रधानमन्त्री र प्रचण्डलाई एकल अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव…हेर्नुहोस् ।
Nextकुनै कदम चालेको शंका मात्रै भयो भने त्योभन्दा कडा कदम चाल्छु…प्र.म ओलि !
सूर्य थापा भन्नुहुन्छ : प्रचण्डको प्रस्ताव अराजनीतिक हो, फिर्ता नगरे नेकपाको कुनै तहको बैठक हुँदैन !
चरीकोट अस्पताल पशुपति चौलागाईँ स्मृति अस्पतालमा रुपान्तरण